Isifundo esidijithali sonyango nobambiswano eMzantsi Afrika (i-Digital MEdIC SA) siliphondo leziko lwezifundo zonyango eStanford kunye nesikolo sase Stanford sonyango. Siliqela elincinci lootitshala bezempilo, abazobi beimifanekiso, abenzi bemifanekiso-bhanyabhanya kunye noochwepheshe bezedijithali.
Sisebenza kunye neeklinikhi zoluntu, amaziko ezemfundo kunye nabameli bezempilo kurhulumente, ukuchonga izihloko zempilo ezibalulekileyo eMzantsi Afrika, ngoko ke sikwazi ukwenza izifundo zempilo ezifikelelekayo, kwaye ezikhethekileyo nakubani na, naphi na, naliphi na ixesha. Zonke iziqulatho esizenzayo zifumaneka smahla kuluntu kwaye siqinisekisa ukuba uluntu luyabandakanyeka, ngokuthi sisebenzise imifanekiso ecacileyo nodliwo-ndlebe lwabantu baseMzantsi Afrika ababelana ngamabali abo kunye neembono zabo.
I-100% ye- Breastfed Initiative luphumo lobambiswano phakathi kweziko i-Stanford kwezeMfundo zeMpilo kunye nabathabathi-nxaxheba ababandakanyekayo: iSebe lezeMpilo laseNtshona Koloni, iYunivesithi yaseKapa, iYunivesithi yaseStellenbosch, i-UNICEF, i-Philani Child Health and Nutrition, IYunivesithi yaseWitswatersrand, iYunivesithi yaseLimpopo kunye ne-First 1000 Days Initiative.
Nceda ubhiyozele ukuncancisa kunye nathi – ukhetho lokuqala ekondleni ikusasa leMzantsi Afrika.